Posted by coral nyo at 21:54
ဖတ်ရတာကြည်နူးစရာ အတိတ်ရဲ့ခြေရာလေးတွေ ....
“A strong woman will automatically stop trying if she feels unwanted. She won't fix it or beg, she'll just walk away. ”
“I think its time to be happy again”
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းသီချင်းတွေကို သူထွက်ထားတဲ့ အယ်လ်ဘမ်တွေတိုင်း တစ်ပုဒ်စ နှစ်ပုဒ်စ နားထောင်ဖူးတယ်..။ အဓိကကတော့ FM မှာလွှင့်လို့ နားယဉ်...
Idiots အဖွဲ့က ကိုတွတ်ပီ(ရေမွန်)ကိုယ်တိုင်ရေးဆိုတဲ့ သီချင်းတွေကို သူ့ပထမအယ်လ်ဘမ် “လူအဂီတ” ထဲက “ချန်ခဲ့” “မင်းနဲ့နီးဖို့” “နေရစ်ခဲ့တေ...
မကြာသေးခင်ကမှ ဆရာမကြီးကြည်အေးရဲ့ “မီ”ကို ကျွန်မဖတ်ပြီးတော့မှ ဒီဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာဏကြီး ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ရိုက်နေပြီဆိုတာ သု...
YAK အဖွဲ့ကို ကျွန်မသိဘူး တခါမှလည်းမကြားဖူးဘူး...။ ကျွန်မ ဖုန်းထဲကို Joox သီချင်း App လေးထည့်ဖြစ်တော့ မိုးရာသီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းေ...
ညီမ မဒမ်ကိုး ဒီတဂ်ပို့စ်လေးရေးခိုင်းတာကြာပြီ...။ ဒီလို ဆေးပညာပေးစာမျိုးက ရေးနေကျမဟုတ်တော့ အခက်တွေ့နေတာပေါ့...။ ဒါကြောင့် မီးဖိုချောင်နဲ့...
My Name is “Me”....
My New Favorite Vege
simply coral's kitchen (coffee) (5)